कहाँ छन् १९२ देशका प्रहरीले खोजिरहेका सांसद दीपक मनाङे ? - Bidur Khabar
कहाँ छन् १९२ देशका प्रहरीले खोजिरहेका सांसद दीपक मनाङे ?
विदुर खबर २०७४ चैत ४ गते ८:०६
काठमाडौं । मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचिीत ‘डन’ दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) विरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत् ‘रेडकर्नर’ जारी गरेसँगै उनी कहाँ छन् भन्ने चासो बढेको छ । मनाङेविरुद्ध ‘रेडकर्नर’ जारी भएसँगै उनको खोजी १ सय ९२ देशको प्रहरीले गर्नेछ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपानेले दीपक मनाङे फरार अपराधी भएकाले उनको खोजी देशविदेशमा भइरहेको बताए ।
निर्वाचित सांसद मनाङेविरुद्ध अदालतले फैसला गर्दा नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको सीआईबी टोली किन चुक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सुरक्षा अधिकारी दिन मान्दैनन् । उच्च प्रहरी अधिकारी पनि मनाङे भारतमै छन् कि अन्य मुलुक गइसके भन्नेमा अन्योलमा छन् । भारतबाट सडकमार्ग हुँदै भुटान, बंगलादेश तथा पाकिस्तान जान सकिन्छ ।
प्रायः उच्च तहका डनहरुले पासपोर्ट पनि दुई–तीन बनाएका हुन्छन् । अधिकांश अपराधीको सेल्टर दुबई र मलेसियालाई मानिन्छ । काठमाडौं प्रहरीले पनि मनाङेलाई लामो समयसम्म खोजेको थियो । तर, उनले काठमाडौं छाडेको सूचनासँगै प्रहरीले मनाङे खोजी अभियान स्थगित गरेको थियो ।
२०६९ साउन २८ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ अन्तर्गतको मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैदको फैसला गरेको थियो । त्यही फैसलालाई २०७४ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै मनाङे फरार भएका थिए । त्यसपछि उनी प्रहरीका खोजीमा त परे, तर फेला परेका छैनन् ।
२०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समूहले चक्रे मिलनको हात छिनालेको घटनामा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । मनाङेले त्यही घटनामा २ वर्ष जेल सजायसमेत काटिसकेका छन् । उनी ३ वर्ष अझै जेल बस्नुपर्ने थियो । सो घटनाका अन्य ४ जनाले भने सफाइ पाएका थिए ।